သကျတနျ့ခြို: December 2009
Happy Birthday နှင်းဟေမာ (နှင်းကဗျာ ၊ သူငယ်ချင်းအတွက်ကဗျာလက်ဆောင်)
Posted by သက်တန့်ချို at 2:38 PM5comments:
ဇော် ၂ ဇော်
ကျွန်တော့်မှာ အစ်ကို နှစ်ယောက် ရှိတယ် ။ အစ်ကို အရင်းတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ တစ်ဝမ်းကွဲတွေပါ ။ ဒါပေမယ့် တစ်အိမ်ထဲ အတူနေကြတာဆိုတော့ ညီအစ်ကို အရင်းတွေလိုပါပဲ ။ အမေရဲ့ အစ်မက မွေးတာပါ ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ် ။ ညီမ တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ် ။ သူနဲ့ ကျွန်တော်က လေးနှစ်ကွာတယ် ။ အစ်ကို နှစ်ယောက်ကို ဇော် နှစ်ဇော်လို့ခေါ်ရတာက အစ်ကို အကြီး နာမည်က ဇော်လတ်တဲ့ ။ အစ်ကိုငယ်နာမည်က ဇော် ထက်တဲ့ ။ ဇော်တွေဆိုတဲ့အတိုင်း တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီဆိုးကြတာပါပဲ ။ အစ်ကို ကြီးကိုတစ်အိမ်လုံးက ဇော်လတ်လို့ ဘယ်သူမှ မခေါ်ကြဘူး ။ သူ့ကို ကျွန်တော်ကစပြီး ဘိုးတော်လို့ နာမည်ပေးထားတယ် ။ ဘိုးတော်ဆိုလို့ ပုတီးကြီးဆွဲ တရားစာတွေရွတ် ဂူ ဗိမ္မာန်တွေမှာ တရားလိုက်ကျင့်နေတဲ့ ဘိုးတော်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ ။ ကျွန်တော့်ဆီက ပစ္စည်းတွေကို " မ " လွန်းအားကြီးလို့ ဘိုးတော်လို့ ခေါ်တာပါ ။ ဒါနဲ့ တစ်အိမ်လုံးက ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အတိုင်း ဘိုးတော်လို့ ခေါ်ကြရော ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်က သူတို့ဘာသာ တစ်ယောက်ချင်းသာဆိုးတာ ညီအစ်ကို အချင်းချင်းကြတော့ အရမ်းချစ်ကြတယ်ဗျ ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်ကိုဆို သူတို့ နှစ်ယောက်လုံးက အတော့်ကို ချစ်ကြတယ် ။ သူတို့ လက်ထဲမှာပဲ ကြီးခဲ့လို့လား မသိပါဘူး ။
မှတ်မှတ်ရရ...... ။ ကျွန်တော် ကိုးတန်းနှစ်မှာပေါ့ ။ ကိုးတန်းမှာ ကျူရှင်ယူပါတယ် ။ အဒီတုန်းကတော့ စာကတော့ သူလိုကိုယ်လိုပါပဲ ။ သိပ်ပြီး ထူးထူးချွန်ချွန်ကြီး တော်တာမျိုး မရှိဘူး ။ဒါပေမယ့် ကျူရှင်မှာ ကျတော့ အခြားအခန်းကလူတွေနဲ့စာရင်စာတော်သလို ဖြစ်နေတာကိုး ။ စာတော်တော့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ ။ စာမေးတဲ့သူတွေ ရှိလာပါတယ်။ ကောင်မလေးတွေလည်း ပါလာတာပေါ့ ( ကိုယ်ကရုပ်လည်းဖြောင့်တာကိုး ...ဟဟ စတာနော်) အဲဒီမှာ ဇာတ်လမ်းက စတာပါပဲ ။ဆံပင်ရှည်ရှည် ရုပ်ချောချောကောင်မလေး တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို သင်္ချာ အမြဲတမ်းမေးတယ် ။ ကောင်မလေးက သင်္ချာတော့ အတော့်ကို ညံ့တယ် ။ ကျွန်တော်ကစာတွေဘာတွေ နားမလည်တာ ရှင်းပြတော့ ကောင်မလေးကို လိုက်နေတဲ့ အုပ်စုက ကျွန်တော့်ကို သိပ်မကြည်ကြတော့ဘူး ။ သူတို့က အုပ်စုတောင့်တယ် ။ စုစုပေါင်း ၁၅ ယောက်လောက်တော့ ရှိမယ်ထင်တယ် ။ တစ်ညနေ ကျူရှင်ကဆင်းတော့ ၅ ယောက်လောက်က ကျွန်တော့်ကို ပိတ်ရပ်ပြီး
" ဟေ့ကောင် မင်းငါ့ကောင်မလေးနဲ့ ဝေးဝေးနေပါ မင်းကို ကြည့်မရတာကြာပြီ "
တဲ့ ။ ပထမတော့ ကျွန်တော်ကြောင်သွားတယ် ။ နို့ ကိုယ်နဲ့လည်း မသိမှ မသိပဲကိုး ။ အဲဒါနဲ့
" ဟေ.. မင်းတို့က ဘယ်သူ့ကိုပြောတာလည်း ဘယ်ကောင်မလေးတုန်း "
ဆိုပြီး ပြန်မေးလိုက်တယ် ။ ဟုတ်တယ်လေ စာလာမေးတဲ့ မိန်းကလေးတွေက အများကြီးဟာကိုး)) အဲဒီတော့ သကောင့်သားက
" အေး......ဇလပ်ဝါကို ပြောတာကွ နားလည်လား ဒီနေ့ကစပြီး မင်းဝေးဝေးနေပါ "
ပြောပြောဆိုဆို ငါးယောက်သား ချာကနဲ လှည့်ထွက်သွားတယ် ။ ကိုယ်ကသာ ဇဝေဇ၀ါနဲ့ ကျန်ခဲ့တာ ။ ဟုတ်တယ်လေ ဇလပ်ဝါဆိုတာ ကျွန်တော်သိတာကတော့ ဘီစကစ်ပဲ ။ စားလို့ကောင်းတယ် ဆိမ့်တယ် ။ အာ... ဘယ်တွေရောက်ကုန်ပါလိမ့် ။ အဲဒီဇလပ်ဝါဆိုတာက ဘယ်ကောင်မလေးကို ပြောမှန်းကို မသိဘူး ။ အဲဒါနဲ့ နောက်တစ်နေ့လည်း ဆရာအိမ်စာပေးလိုက်တဲ့ စာတွေကို နားမလည်လို့တဲ့ ကောင်မလေးကစာထပ်မေးတယ် ။ ဘုရားစူးရပါစေရဲ့ ။ အဲဒီတုန်းက ကောင်မလေးကို လုံးဝ မရိုးသားတဲ့စိတ်မရှိခဲ့ဘူး ။ စာမေးတယ် စာဖြေတယ်ဆိုတဲ့ အသိပဲရှိတယ် ။အဲဒါကို ဟိုကောင်တွေက ကျူရှင်အပြင်ကနေ တွေ့သွားပါလေရော ။
ကျူရှင်အဆင်း လမ်းမပေါ်လည်းရောက်ရော ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ လူ ၁၅ ယောက်လောက်ဝိုင်းလာပြီး ၀ိုင်းထိုးကြပါလေရော ။ ပထမတော့ ရုတ်တရက် တစ်ချက်အထိုးခံလိုက်ရတယ် ။ နောက်တော့မှာ ကျောင်းတုန်းက ကိုယ်က သိုင်းပြိုင်ပွဲဝင်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတာ သွားသတိရတယ် ဟဟ ... ။ ဘာလုပ်လို့ လုပ်မိမှန်းတောင်မသိဘူး ။ ၃ ၊ ၄ ယောက် ဖုန်းဖုန်းဖုန်း ဆို ပစ်လဲသွားတယ် ။ တစ်ကောင်က ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်း အရှိန်နဲ့ ပြေးဝင်လာတယ် ။ သနားစရာကောင်ပါ ။ ခြေထောက်လေး ဆန့်ပေးလိုက်တာ လမ်းခုလတ်မှာတင် ပစ်လဲသွားတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်း မင်းသားတစ်ယောက်ထဲ ဘယ်နိုင်မလဲနော့ ။ ၀ိုင်းတီးလိုက်ကြတာ ကြယ်တွေလတွေကို မြင်ရော...ဟီး ။ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ဖူးယောင်လို့ ။ အဲဒါနဲ့ အိမ်လည်း ပြန်ရောက်ရော ဇော် ၂ ဇော်က အိမ်ရှေ့က ခုံတန်းလျားမှာ ဂစ်တာတီးနေကြတယ် ။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း မြင်ရော ဂစ်တာကြီး ပစ်ချပြီး အပြေးရောက်လာပါရော ။ မင်းကို ဘယ်သူလုပ်လဲ ဘာညာပေါ့ ။ ကိုယ်မှ မသိတာကိုး သူတို့ကို ။ အဲဒါနဲ့ ပုံစံတွေပြောပြတော့ ဇော်ထက်က ၀ုန်း ဆို အိမ်ပြေးဝင်သွားတယ် ။ နောက်တော့ ခါးကြားမှာ သူကိုင်နေကြ ကင်တို ဓါးကို ထိုးလာတယ် ။ အကုန်လုံးကို သတ်မယ်ပေါ့ ။
တစ်အိမ်လုံးက ဓါးမယူသွားဖို့ကို မနဲပြောရတယ် ။ ဟုတ်လည်းဟုတ်တယ် ။သူကစိတ်အရမ်းထက်တယ် ။ မြန်လည်းမြန်တယ် ။ ရန်ပွဲဆို သူမပါရင်မပြီးဘူး ။ သူက ဂိုဏ်းနဲ့နေတာကိုး ။ သူတို့ဘာသာသူတို့ ဖွဲ့ထားတာ စုံနေတာပါပဲ ဘာဂိုဏ်းတွေမှန်းကို မသိ ။ အဲဒါနဲ့ ဘိုးတော်က
" ဟေ့ကောင်ဇော်ထက် မင်းအသာနေစမ်းပါကွာ ငါတစ်ယောက်လုံးပါတယ် "
ဆိုပြီး ညီအစ်ကို ၃ ယောက်ချီတက်လာကြပါတယ် ။ဟိုကောင်ဇော်ထက်က လမ်းတစ်လျောက် သူ့ဘော်ဒါတွေကို မျက်ရိပ်ပြလာတယ် ။ အတော်လှမ်းလှမ်းရောက်တော့မှ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ လား..လား... မယောင်မလည်နဲ့ လိုက်လာကြတဲ့ သူ့ဘော်ဒါတွေ အများကြီး ။ ဇော်ထက် ကျွန်တော့်ကို ချသွားတဲ့ ကောင်တွေရဲ့ စားကျက်ကို သိပုံရတယ် ။ ကျူရှင်နဲ့ မလှမ်းမကမ်းက လဖ္ဘက်ရည်ဆိုင်ကို တန်းသွားတယ် ။ ဟုတ်လည်းဟုတ်တယ် ။ဟိုကောင်တွေ လဖ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေကြတယ် ။ ကျွန်တော်ထိုး လိုက်တဲ့ လေး ငါးကောင်ကတော့ ဆေးခန်းသွားလောက်ပြီထင်တယ် မတွေ့ရတော့ဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက်ကို လည်း မြင်ရော ဟိုကောင်တွေ မျက်နှာပျက်ကုန်တယ် ။ သုံးယောက်နဲ့ ဆယ်ယောက်လောက်ကို ဘာလို့ မျက်နှာ ပျက်ရတာလည်းလို့ ကျွန်တော်တောင်တွေးမိသေးတယ် ။ လဖ္ဘက်ရည်ဆိုင်ရှေ့ရောက်တော့ သုံးယောက်လုံး အပေါက်ဝမှာ ရပ်လိုက်ကြတယ် ။ အံမယ်.. ဟို ငတိတွေ အကုန်လုံး ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ လာရပ်ကြတယ် ။ မျက်နှာလေးတွေက ဇီးရွက်သာသာလောက်လေးတွေ ရှိတော့တာ ။ ပြီးတော့ ငတိတွေထဲက ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်တူသူက
" ကို....ကို ဇော်လတ် "
" အေးမင်း တို့ထိုးလိုက်တာ ငါ့ညီပဲ "
" ဗျာ.... ဟို...ဟို...ကျ...ကျနော်တောင်းပန်ပါတယ် ကိုဇော်လတ် "
" ဘာကွ..အဲဒီတော့ "
" ဟို ကျနော်တို့ကို ကြိုက်သလို လုပ်ပါ "
" ကဲ.. ညီ ကြိုက်သလိုလုပ်တဲ့ ဒီကောင်တွေကို တစ်ယောက်ချင်းဆီ လိုက်ထိုးချင်လား "
" အာ..ထိုးချင်ပါဘူး ဘိုးတော်ရာ သူတို့ ညီ့ကို ဘာလို့ ၀ိုင်းချတာလဲ သိချင်တယ် "
" ကဲ ဟေ့ကောင်တွေ မေးတာဖြေလိုက် "
" ဟို...ဟို... ကျနော်လိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်ရှိလို့ပါ "
စကားလည်း ဆုံးရော ၀င်ထိုးလိုက်တာက ဇော်ထက် ။ တစ်ချိန်လုံး မျက်နှာ နီကြီးနဲ့ ကြည့်နေတာ ။ စိတ်ကြိုက်သာ လွှတ်ပေးလိုက်လို့ကတော့ မတွေးဝံ့စရာပါ ။ ကျွန်တော့်ကိုထိရင် ငယ်ငယ်လေးကတည်းက သူက ဆတ်ဆတ်ထိမခံတတ်ဘူး ။ အထိုးခံလိုက်ရတဲ့ကောင် ဘာတစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောရဲဘူး ။ ဘေးကလည်း ဘယ်ကောင်မှ ၀င်မဆွဲရဲကြဘူး ။ ဘိုးတော်က
" မင်းတို့ ငါ့ညီကျေနပ် အောင်တောင်းပန်လိုက် "
" ဟုတ်...ဟုတ်ကဲ့ ဟို.. ကျနော်တို့တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျ ကိုဇော်လတ်ညီမှန်းမသိလို့ပါ "
" နေစမ်းပါဦးဗျာ..မဟုတ်သေးပါဘူး ခင်ဗျားပြောတဲ့ ကောင်မလေးကို ကျနော်လည်း မကြိုက်ရပါလား စာရှင်းပြယုံပါ ကျူရှင်က ဘယ်ကောင်မလေးကို မှ ကျနော်မကြိုက်ဘူး ”
“ ဗျာ...ဟုတ်..ဟုတ်လား ၀မ်းသာလိုက်တာဗျာ ကျနော်ပိုးနေတာ ကြာပြီဗျ ကျနော်က အစ်ကိုနဲ့ ညိသွားပြီမှတ်လို့ ကျနော်..အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ် ဗျာ မကျေနပ်ရင် ကျွန်တော်တို့ကို စိတ်ကြိုက်ထိုးဗျာ”
“ အာ..အလကားနေရင်း ရပါတယ်ဗျာ ခင်ဗျားတို့ သိရင်ပြီးတာပဲ”
အဲဒီခေါင်းဆောင်နာမည်က ကျော်အောင်တဲ့ ။ အဲဒီနေ့က ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက်ကို ဒီကောင်တွေ ကြေးအိုးလိုက်တိုက်တယ် ။ ဆေးခန်းလည်း လိုက်ပို့တယ် ။ အိမ်ကမိဘတွေကိုလည်း လိုက်တောင်းပန်တယ် ။ အဲဒီကိစ္စ ဖြစ်ပြီးတော့ မှ ဘိုးတော်ကို အတော်အထင်ကြီးသွားတယ် ။ လူမိုက်တွေတောင် ချစ်ကြောက်ရိုသေရပုံပဲ ။ အစွမ်းရှိလိုက်ပါဘိ ။
နောက်တစ်နှစ်လောက်အကြာမှာတော့ ကျွန်တော့်ဆီကို ဖိတ်စာတစ်စောင်ရောက်လာပါတယ် ။
“ ကျော်အောင်+ ဇလပ်ဝါ” တဲ့ ။ ဖိတ်စာကို ကိုင်ပြီး ပါးကို စမ်းကြည့်မိလိုက်တယ် ။ အခုထိနာနေသလိုပဲ ဟဟ.. ။ အခုဆို သူတို့ ကလေး ၃ ယောက်တောင်ရနေပြီ ။ ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလည်း အဲဒီစုံတွဲခဏခဏ လာလည်တယ် ။ ကလေးတွေကလည်း ဦး....ဦးနဲ့ ။ သူတို့ ခေါ်လိုက်တိုင်း ပါးစောင်က နာနာလာသလိုပါပဲ ။
စာရေးသူ.....သက်တန့်ချို ( ၁၁း၄၀ ည ၂၉.၁၂.၀၉)
Posted by သက်တန့်ချို at 11:06 AM 15 comments:
ကျွန်တော်နှင့်ဟောက်ဆာဂျင်ဘ၀ (အပိုင်း ၅)
ကောင်းကင်တစ်ခွင်လုံးက အုံ့မှိုင်းကာမဲမှောင်နေသည်။ မိုးကတော့ ( မိုးဖြူမစဲ မိုးမဲမရွာ ) လို့သာ ပြောတာ ရွာလိုက်သမှ တ၀ုန်းဝုန်း ။ " အုံးဂွမ် အုံးဂွမ် " နဲ့ဖားအော်သံတွေက နားထဲသို့ ဆူညံစွာ ၀င်ရောက်လာခဲ့သည်။ အော်.. ဘာလိုလိုနဲ့ နောက် ၂ ရက်ဆို အရိုးဆောင်ဆင်းရတော့မှာပါလား ။ အရိုးဆောင်မှာ ဆင်းရမည်ဆိုတော့ နဲနဲတော့ ရင်ခုန်မိသည် ။ ကျောက်ပတ်တီးတွေကိုင် အရိုးတွေကို တူတွေလွှတွေနဲ့ ဖြတ်ဆက် အတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုပါ ။ တွေးရင်းတွေးရင်းနဲ့ မိုးသံတဖွဲဖွဲဖြင့် ပြန်လည် အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည် ။
ဒီနေ့ ဂျူတီနေ့ ။ Ortho ward မှာ ပထမဆုံး ဂျူတီစဆင်းရမည် ဆိုတော့ လူက မြောက်ကြွမြောက်ကြွ ။ ပထမသုံးရက် သူငယ်ချင်းတွေ ဆင်းသွားတုန်းက အသစ်တက်သည့်လူနာ(NA) က အများဆုံးမှ ၅ ယောက် ။ ဒါကြောင့် Ortho ကို Oasis လို့ပြောကြသည် ။ ဟောက်ဆာဂျင်ဘ၀မှာ လာပြီး အပြည့်အ၀ အနားယူရသည်ကိုး ။ ဒါပေမယ့်လည်း သိတယ်ဟုတ် ။ အခြားလူမဟုတ်ဘူးလေ ။ ဘဲကြီးဆိုတော့ကား........ ။ အတူဆင်းသည့် ကောင်တွေကိုလည်း ကြည့်ပါဦး ။ ဂျပု ၊ အရှည်ကြီး ၊ ၀က်မ နဲ့ ကျွန်တော် ။ အားလုံး ယောင်္ကျားလေးချည်းပဲ ။ ပွဲကသိမ်းရော.. ။ ဂျူတီစဆင်းလို့မှ နာရီဝက်မပြည့်သေးဘူး ။
" ဆရာ.. NA လာတယ် "
ဟို ကောင် သုံးကောင်ခေါင်းထောင်သွားကြသည်။ ဦးခေါင်းပြောပါတယ် ။ ဟုတ်တယ်လေ ... သူများတွေဆို ညနေပိုင်းလောက်မှ တယောက်စ နှစ်ယောက်စ တစ်နေ့လုံးမှ ၅ ယောက် ။ ကိုယ့်ကျတော့ နာရီဝက်မပြည့်သေးဘူး လာပြီ ။ ဒီတော့ History ယူ Physical Examination စမ်း ဓါတ်မှန်ရိုက် နောက်တော့ PG နဲ့ဝိုင်းပြီး ကျောက်ပတ်တီးကိုင်ပေးလိုက်ကြသည်။ PG က
" မင်းတို့ အတော်ကံကောင်းတယ် ဒီနေ့ စောစောစီးစီး လူနာလာတယ် ကဲ.. ငါ Surgery ဖက် ခဏသွားအုန်းမယ် "
ပြောလို့ မှမဆုံးသေး ။
" ဆရာ ကားတိုက်လို့တဲ့ NA လာတယ်"
ပီဂျီဆရာ ကြောင်သွားသည်။ သူ့ကြည့်ရတာ သိပ်တော့ယုံချင်မပေါ် ။ ဟုတ်တယ်လေ.. အိုအေစစ်က ဘယ့်နှယ့်လူနာ ခဏခဏလာနေရတာတုန်း ။ ၀ိုင်းလိုက်လာသည့် အဖော်နှင့် ကဒ်ကြီးကိုတွန်းပြီး ဆူညံစွာ ၀င်လာကြသည်။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ ။ စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ အရိုးက ကျိုးပြီး အသားကို ဖောက်ဝင်သွားသည့်အတွက် ခွဲခန်းဝင်ရမည်ပေါ့ ... ။ သူဝင်မယ် ငါဝင်မယ်နဲ့လုကြပြန်ရော ။ ၀က်မက အနိုင်ရသွားတယ် ။ သူကခွဲခန်းကို စစ်တိုက်မဲ့ စစ်သူကြီး တစ်ယောက်လိုချီတက်သွားတယ် ။ ၂ ယောက်မြောက်လူနာကခွဲခန်းဝင်သွားတော့ အောက်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေက နားရပြီပေါ့ ။ ရေလေးသောက်မယ်လုပ်တုန်း
" ဆရာ NA "
တဲ့ ... ။ ဆရာမ နာ့စ်က ကျွန်တော်တို့ကို သိပ်ကြည်ပုံမရတော့ဘူး ။ ဟုတ်တယ်လေ သူလည်း အိုအေမှ မစစ်နိုင်တော့တာကိုး ။ ဟိုဂျပုက
" ဘဲကြီး ခင်ဗျားကတော့လုပ်ပြီ medical တုန်းက case လိုက်ပုံမျိုးနဲ့ဆို ကျွန်တော်တို့ သေမှာပဲ "
တဲ့ ။ ဟုတ်ပါတယ် ဒီကောင်တွေ အတော်နဖာ ထွက်သွားတယ် မက်ဒီကယ်တုန်းက ဟဟ ။ အဲဒီတုန်းက လေးယောက်ပဲ ဆင်းရတယ် ။ ကျွန်တော်နဲ့ ကောင်မလေး (ကျွန်တော့်ထက်အသက်ကြီးပါတယ်) တစ်ယောက် ကတစ်ဖက် ။ ဂျပုနဲ့ အရှည်ကြီးက တစ်ဖက် ။ အဲဒီတုန်းက ၀က်မက အခြားအဖွဲ့မှာ ။ အင်းစိန် မက်ဒီကယ်မှာ male ward , female ward ခွဲထားတယ် ။ တစ်ဖက်ကို ဟောက်စ် နှစ်ယောက် ပေါ့ ။ အေအက်စ် ကတော့ တစ်ယောက်ပဲ ။ စုစုပေါင်း ခြောက်ဖွဲ့လောက်ရှိမယ်ထင်တယ် ။ သူများအဖွဲ့တွေဂျူတီနေ့တွေလိုက်မေး ။ NA ၁၀ ယောက် မိုင်ကုန်ပဲ ။ ကျွန်တော်တို့ ဂျူတီ ။ မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီနေ့က အကူပါခေါ်ရတယ် ... ။ အယောက် ၃၀ ကျော်သွားတယ် .. ။ လူကို စိတ်နဲ့ မကပ်တော့ဘူး ။ လေထဲမှာ လွင့်နေသလိုမျိုး ။ အတူဆင်း သည့်ကောင်မလေးက နင်နဲ့ဆို တစ်သက်လုံး ဂျူတီအတူမဆင်းတော့ဘူးတဲ့ ။ ကဲဒါတွေထားပါ ။
ပြန်ဆက်ရအောင် ။ အဲဒီလိုနဲ့ နာ့စ်က သိပ်မကြည်တော့ဘူး ။ ဟိုကောင်ကလည်း နေ့လည် ၁၂ နာရီခွဲလောက်မှ OT ခွဲခန်းက ပြန်ဆင်းလာတယ် ။ အိုကေလားတဲ့ ။
" အေး NA ၁၀ ယောက်ရှိပြီ "
" ဟုတ်လို့လားကွာ "
" ဒီမှာဟေ့ မင်းဂျီးတော် ကြည့်ဟေ့ "
ဆိုပြီး Register book ကိုပြလိုက်တော့မှ ဟိုကောင်ယုံသွားတယ် ။ အဲဒီနေ့တစ်နေ့လုံး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သိပ်တောင်စကားမပြောခင်ကြတော့ဘူး ။ တစ်ညလုံးလည်း လာလိုက်တဲ့NA တွေတဖွဲဖွဲ ။ အခုမှ တကယ့်ကို အိုအေစစ်ဖြစ်သွားတယ် ဟဟ ။ အိုတီတွေတက်ရတာလည်းမနည်း ။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း အများဆုံး အိုတီဝင်ပစ်လိုက်တယ် ။ ဟွန်း.. ပညာရတာပေါ့နော့ ။ နောက်တစ်နေ့မနက် စာရင်းချုပ်လိုက်တော့ စုစုပေါင်း ၂၃ ယောက် ။ PG ကိုကြည့်လိုက်တော့ ပျော့ဖက်ဖက်သာ ကျန်တော့သည် ။ ( လူပုံစံကိုပြောပါတယ် )
အဲဒီနေ့ ဂျူတီဆင်းပြီးနောက် ၂ ရက်မှာ နာဂစ်မုန်တိုင်း ၀င်တိုက်သွားပါတယ် ။ ဆေးရုံလည်း ၂ ရက်လောက် ဘာတွေဖြစ်သွားမှန်းကို မသိလိုက်ဘူး ။ ဆေးရုံးသွားရတာ တောထဲရောက်သွားသလိုပဲ ။ ဟိုသစ်ပင်အောက်က လျှိုသွားလိုက် ငုံ့သွားလိုက် ကျော်သွားလိုက်နဲ့ တောတွင်းခရီးသွားသလိုပဲ ။ နောက် ၄ ရက်မြောက်နေ့တော့ ကွမ်းခြံကုန်းကို Volunteer သွားမယ် တဲ့ ။ ဘယ်သူလိုက်မလဲတဲ့ ။ လေးယောက်စလုံး ရှေ့ဆုံးကလိုက်သွား ခဲ့ပါတယ် ။ ဂျူတီမဆင်းချင်၍ မဟုတ်ရပါ ။ ခရီးထွက်ရမယ်ဆို ဖင်တကြွကြွဖြစ်နေခြင်းသာ ။ ၆ ရက်မြောက်နေ့မှာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ဧရာဝတီ နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကို ၂ ပါတ်ခရီး သွားရမယ်တဲ့ ။ အလှည့်ကျပေါ့ ။ ပထမဆုံး တစ်သုတ်မှာပဲ လိုက်သွားခဲ့ပါတယ် ။ လမ်းတစ်လျောက်ကတော့ မြင်မြင်သမျှ .... စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေချည်းပဲ ။ ကျွန်တော်တို့ကား လာတယ်ဆိုလို့ သတင်းကြားလို့တဲ့ ကလေးတစ်သက်က ချောင်းရိုးတလျောက်ကို ငှက်ပျော်တုံးတွေ အုန်းတုန်းတွေ လှော်ပြီး ရောက်လာကြပါတယ် ။ သူတို့ကို စားစရာတွေချပေး ။ နောက်တော့ မဲနှိုက်တော့ ကျနော်တို့က ဒေးဒရဲ တစ်ဖက်ကမ်း ကျိုက်ထော်မြို့လေး ဆီရောက်သွားပါတယ် ။ မြို့ သာဆိုတာပါ ရွာလေးပါပဲ ။ တိုက်နယ်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရှိတယ် ။ သဘောကလည်း ကောင်းမှကောင်း ။ ဆေး၂ကလို့ ဆိုတာနဲ့ သူ့ ညီတွေအတိုင်းပဲ ဆက်ဆံတာ ။ အရမ်းလည်း ခင်သွားကြတယ် ။ အဲဒီမြို့လေးမှာ ရောက်နေတဲ့အခိုက်မှာပဲ Myanmar Medical Association က ဆရာဝန်တွေရောက်လာပါတယ် ။ သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီး နေ့စဉ် ရွာတွေဆင်း ဆေးကု တစ်ချို့ရွာတွေဆို ဗွက်တွေ ထဲဆင်း ရွှံ့တွေလူး ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မမောပန်းခဲ့ဘူး ။ စိတ်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေခဲ့တယ် ။ အဲဒါဟာ ဆရာဝန် စိတ်ဓါတ်လားလို့ တစ်ခါတစ်ခါတွေးမိတယ် ။ ရွာတွေဆီသွားရင် လှေလေးတွေနဲ့ သွားရတာလည်း ရှိတယ် ။ မိုးက သဲနေတုန်းဆိုတော့ တစ်ခါတစ်လေဆို လှေက မှောက်မတတ်ပဲ ။ ဒါပေမယ့် .....အဲဒီအချိန်မှာ ထူးဆန်းတာက ကျွန်တော်တို့ ကြောက်ရွံ့မနေခဲ့ဘူး ။ သတ္တိတွေ အလိုလိုပြည့်နေခဲ့တယ် ။ ဆရာဝန်တွေ လာတယ်ဆိုတာနဲ့ ၀ိုင်းလာကြတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေ.. ။ ရိုးသားတဲ့ မျက်နှာတွေ ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေလုံး ၀မရှိခဲ့ဘူး ။ သူတို့ကျွေးတဲ့ မှိုနတို နဖားရွက် သုံးဦးစပ် ငပိရေကျို ငါးကြော် ဘဲဥချဉ်ရည် ။ စေတနာတွေ ... အရမ်းကို အရသာရှိလှပါတယ် ။
စာရေးသူ.....သက်တန့်ချို ( ၁၁း၃၀ ည ၂၈.၁၂.၀၉)
Posted by သက်တန့်ချို at 11:03 AM 11 comments:
Nemo 33 ဆိုတာဟာ Brussels, Belgium နိုင်ငံမှာ တည်ရှိပါတယ် ။ ကမ္ဘာ့အနက်ဆုံး ရေကူးကန်အဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်... ။ အိမ်ပုံစံ ရေကူးကန်ဖြစ်ပါတယ် ။ အထပ်ပေါင်းများစွာ ပါရှိပြီး ရေဖိအားဒါဏ်မခံနိုင်၍ တော်ရုံရေကူးသမားများ အောက်ဆုံးထပ်သို့ ကူးခပ်သွားနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း သိရပါတယ် ။ဘယ်လောက်နက်သလဲဆိုတာကတော့ သွားကူးကြည့်မှ သိမှာပဲ ။
(ကိုယ်ကတော့ ဒူးခေါင်းလောက်ရှိရင်တောင် သိပ်မသွားရဲဘူး... တုန်နေပြီ အဲဒီလို ရေကူးကျွမ်းတာ.. ဧရာဝတီသားလေ သိတယ်ဟုတ်း) )
Posted by သက်တန့်ချို at 11:44 AM 14 comments:
အနုပညာကျောင်းတော်မှာ ကျနော်တို့ ပညာအစုံကိုဆည်းပူးနိုင်တယ် ။ အဲဒီကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ အတွင်းမှာရော အပေါ်ဆုံးက အံ့သြစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အစိမ်းရောင်အမိုးဒီဇိုင်းကို ရောပေါ့ ။ ဒီအနုပညာ ကျောင်းတော်ဟာ စင်ကာ ပူ နိုင်ငံ Nanyang နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာ ဒီဇိုင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအချိုး ၅ ခုပါတဲ့ သစ်သားထောင့်ချိုးတွေဟာ ဓါတုပစ္စည်းတွေ ဇီဝပစ္စည်းတွေနဲ့ အတူတကွပေါင်းစည်းပြီးတော့ လှပတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် သဘာဝနဲ့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားတွေကို ပြသထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကတော့ ဒီဇိုင်းအကြမ်းပုံစံပါ ။
စာရေးသူ....သက်တန့်ချို ( ၁၁း၀၀ ည ၂၅.၁၂.၀၉)
Posted by သက်တန့်ချို at 10:11 AM7comments:
ရေအောက်ဖုန်းရုံ ဆိုလို့ရေအောက်ထဲမှာ လုပ်ထားတာလို့ မထင်ပါနဲ့ ။ ရေအောက်ထဲက ဒီဇိုင်းလေး အတိုင်းလုပ်ထားတာပါ ။ ထွင်လဲထွင်တက်ပါ့နော် ။ ဒါပေမေ့ တစ်မျိုးတော့ဆန်းသား ။ ရေအောက်ဒီဇိုင်းလေးကို ကြည့်ပြီး ဖုန်းဆက်လို့ရတာပေါ့နော် ။ တည်ရှိတာကတော့ ပြင်သစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်တွေအတော်များများလည်း ဒီဖုန်းရုံလေးကို စိတ်ဝင်တစားလာ ကြည့်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ် ။ ကဲ ဒို့တွေလည်း သွားကြည့်ကြရအောင်နော့ ။
စာရေးသူ....သက်တန့်ချို (၁၀း၀၀ ည ၂၃.၁၂.၀၉)
Posted by သက်တန့်ချို at 9:57 AM 11 comments:
Labels: ထူးဆန်းသောဖုန်းများ, ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ
ထူးဆန်းစွာ ဖြစ်ပေါ်နေသော တိမ်ပုံသဏ္ဍာန်များ
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ပုံတွေကို တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါ ။ အသက်ရှုမှားလောက်ဖွယ်ရာ ကောင်း ကင် မှ တိမ်ရောင်စုံများကို သင်ခံစားရမှာပါ ။
Arno မြစ်ပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ် ။ ထွက်လာတဲ့ နေမင်းကြီးရဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ တိမ်တွေစုပေါင်းသွားတဲ့အခါမှာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အ၀ါနဲ့ မီးခိုးရောင် ကောင်းကင်ကြီး ဖြစ်လို့သွားပါတယ် ။
Jones တောင်ကြားပေါ်မှာ ညဖက်မြင်ကွင်းဖြစ်တဲ့ လျင်မြန်စွာရွှေ့လျားနေတဲ့ တိမ်တွေဖြစ်ပြီး နိမ့်နိမ့်လေး သွားနေတာဖြစ်ပါတယ် ။ မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ Wes Thomas ကတော့ အရမ်းကိုကံကောင်းသွားပါပြီ ။ Blurred effect ကိုရရှိဖို့အတွက် သူဟာ ကင်မရာကို 30 second exposure ချိန်ခဲ့ရပါတယ် ။
Brooklyn တံတားပေါ်မှာ လမ်းလျောက်စဉ် နွေနေရောင်ခြည်ပတ်ဖျန်းထားတဲ့ မြို့တော်ကို Ben Brown က ရိုက်ကူးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အိမ်ပြတင်းပေါက်ကနေ Diablo တောင်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ၀ါမရင့်သေးတဲ့ ဓါတ်ပုံ ဆ၇ာမလေး Rebecca ဟာ အနီ အပြာရောနေတဲ့ ကောင်းကင်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
နေအရမ်းမြင့်တဲ့အခါမှာ အပူရှိန်က ပြင်းလွန်းပါတယ် ။ တခါတရံမှာ အဲဒီသဘာဝတရားကို Lynn Suckow က နွေရာသီ နေ့လည်ခင်းမှာ ဓါတ်ပုံပညာနဲ့ ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
Valwncia , Spain
Marialuisa Wittlin ရဲ့ အဆိုရအရ ဒီ မှန်ဘီလူးပုံစံ တိမ်တွေဟာ တောင်တွေရဲ့အပေါ်မှာ တစ်နေ့လုံး ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ သူမက ဒီပုံကိုရဖို့အတွက် နေမင်းကြီးမ ၀င်သွားခင် ချစ်စရာ မြင်ကွင်းလေး ကွယ်ပျောက်မသွားခင်မှာ ကြိုးစားရိုက်ကူးခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
Buskerud , Norway
January တစ်လုံးမှာ Scandinavia ကောင်းကင်မှာ အေးအေးစိမ့်စိမ့်နဲ့ ဒီလှပတဲ့ တိမ်တွေဟာ ဖြစ်ပေါ်လို့ နေပါတယ် သူတို့ကို mother-of-pearl cloud လို့လည်း ခေါ်ပါသေးတယ် ။
နေရောင်ခြည်က တိမ်ပါးပါးလေးတွေထဲကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ ညီညာပြန့်ကျဲနေတဲ့ မိုးပေါက်လေးတွေပေါ်ကို ဖြတ်သန်းရပါတယ် ။ အဲဒီအခါမှာ ပုံမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း စွဲမက်ဖွယ် ပုံသဏ္ဍာန်လေး ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် ။
Santa Fe city , Argentina
အရမ်းအံ့သြစရာပါပဲ !!!!! အမည်းရောင်တိမ်တွေပေါ်က အဖြူရောင် အလင်းတန်းကြီး ။ ၈ လလောက်မိုး ခေါင်ပြီးတဲ့အခါမှာ မိုးစရွာတုန်းမှာပေါ့ ။ မိုးက 25 mm ဆိုလိုတာက ၁ လက် သာသာလောက်ပဲ ရွာချပါတယ် ။တိမ်တွေရဲ့ အရွယ်အစားရယ် ဟိုင်းဝေး လမ်းပေါ်က ကားမီးရောင်ရယ် နောက်ခံ မြို့ရဲ့ အဆောက်အအုံတွေကို မှတ်ထားရပါမယ် ။
မနက်စောစောနာရီ ( စင်ကာပူနာရီ ခြောက်နာရီခွဲ) မှာ ရိုက်ထားတာပါ ။ အရမ်းကို မှောင်လွန်းပါတယ် ။
စာရေးသူ.....သက်တန့်ချို (၁၀း၀၀ ည ၂၂.၁၂.၀၉)
Posted by သက်တန့်ချို at 10:31 AM 15 comments:
ရင်ထက်ထက်ကဆီးနှင်းသံ ဆိုတဲ့ လုံးချင်းဝထ္ထုကို ebook အဖြစ်ထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ် ။ မည်သူမဆိုကူး ယူခံစားနိုင်ပါတယ် ။ စိတ်ရှည်ရှည်နှင့် အပိုင်းဆက်များကို ဖတ်ရှုပေးကြသော သူငယ်ချင်းများအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ ။ စာအုပ်လေးကို သိမ်းထားလိုသူများဒီနေရာမှာ ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ ။
Posted by သက်တန့်ချို at 10:12 AM 8 comments:
ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
ခင်ဗျားက အလျော့ပေးခြင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ မထိုက်တန်ဘူး ကျော်ဇေယျာဝင်းတင့်ရေ.. ။ သတိထားပေတော့ ။ ဒိုင်လူကြီး၏ ခရာသံဆုံးသည်နှင့် ထုံးစံအတိုင်း သကောင့်သားက သဲကြီးမဲကြီးဝင်တိုက်သည် ။ ညာလက်သီးဖြောင့်ထိုးသည် ။ သူကဘယ်လက်သီးနှင့်ဆီးခံသည် ။ ဘယ်ခြေနှင့်ကန်သည် ။ သူက ညာခြေနှင့်ပြန်ခံသည် ။သူ ရုတ်တရက်ပြေးဝင်ပြီးဒီကောင့်ဒူးပေါ်ခုန်တက်လိုက်သည် ။ ပထမတော့ ဒီကောင် ကြောင်သွားသည် ။ သို့သော် အရမ်းကို နောက်ကျသွားပြီဖြစ်သည် ။ သူ့ဒူးခေါင်းက ဒီကောင့်ရင်ညွန့်ဆီသို့... ။ လျှင်မြန်လွန်းသောကြောင့်တစ်ချို့က သဲသဲကွဲကွဲမမြင်လိုက်ရ ။ သူ့အချိန်အဆကို သူသိသည် ။ ဒီလောက်ဆိုဒီ ကောင် ၃ ပါတ်လောက်တော့ အနားယူရဦးမည် ။
" ဝေး....ထ.၁ ကွ.. သက်တန့်ကွ ဟေ့ကောင်တွေမင်းတို့ ထ.၆ ကို အရေပြုတ်သောက်မကွ .."
ကျောင်းသားတွေဝမ်းသာအားရထခုန်ကြသည် ။ သူလူအုပ်ကြားတွင် ဆီးနှင်းဖြူလေးကို ရှာဖွေမိသည် ။ သို့သော် သူမကို ရှာမတွေ့တော့ပေ ....... ။
အခုရက်ပိုင်း သိုင်းပြိုင်ပွဲပြီးကတည်းက ဆီးနှင်းဖြူက သူ့ကို ရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ်လုပ်နေသည် ။ သူကတော့ စာမေးပွဲနီးလာ၍ စာကျက်နေသည်ဟုပင် ဖြေတွေးလိုက်သည် ။ သူမကို ကျူရှင်မှာလည်း မတွေ့ရတော့ ။ ဂိုက်ဌားပြီးစာကျက်နေသည်ဟု သူမသူငယ်ချင်းများမှတဆင့် သိရသည် ။ တစ်ရက်သော ညနေခင်းလေးမှာပေါ့..... ။ သူနှင့် ဆီးနှင်းဖြူလမ်းမှာဆုံမိသည် ။ ဆီးနှင်းဖြူက သူ့ဆီတည့်တည့် လျောက်လာသည် ။ နောက်ဘာမှမပြောပဲ သူ့မျက်နှာကို အကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေခဲ့သည် ။
"သက်တန့် နင့်..ကို .. ငါမခေါ်တော့ဘူး"
ဗုဒ္ဓေါ ...ရုတ်တရက်ကြီးပြောလာ၍ သူဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ ။
" နင်ကငါစိုးရိမ်ရအောင် အမြဲလုပ်တယ်...နင့်ကြောင့်ငါညညလည်းစာကျက်မရဘူး နင့်ကိုငါမခေါ်ချင်တော့ဘူး"
သူ့ရင်ထဲမှာ သိမ့်ကနဲခံစားသွားရသည် ။
" နင်ကဘာလို့စာကျက်မရတာလည်း ငါကကြမ်းပိုးယောင်ဆောင်ပြီး နင့်ကို လာကိုက်နေလို့လားဟ"
သူ ရယ်ကျဲကျဲဆိုလိုက်တော့ ကောင်မလေးက မျက်နှာပိုစူပုပ်လာပြီး
" နင်ကပြောင်စပ်စပ်လုပ်နိုင်သေးတယ် ဟွန်း .. နင်သိုင်းပြိုင်ပွဲတုန်းက လဲကျသွားတုန်းက.. ငါဘယ်လောက် ရင်ပူခဲ့ရသလဲ...ကောင်စုတ်"
ဟုဆိုကာလက်သီးဆုပ်ကလေးတွေနှင့် ထုသည် ။ နှလုံးသားထဲထိရောက်လာသည်ဟု ထင်ရသည် ။ ကောင်......မ........လေး.......ရယ်.........။
ဒီလိုနဲ့စာမေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့ကြီးကို အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြေဆိုပြီးစီးသွားလေပြီ ။ ခုချိန်မှာ သူအတွေ့ချင်ဆုံးက ဆီး....နှင်း.....ဖြူ ။ ကျောင်းတစ်ခုလုံးနှံ့အောင်ရှာပြီးပြီ ။ သို့သော်သူမကို အရိပ်အယောင်ပင်မတွေ့ရ ။ ရင်ထဲက နဲနဲလည်း စိုးရိမ်ပူပန်လာသည် ။ နောက်ကျော်ငြိမ်းနှင့်တွေ့တော့
"ဟေ့ကောင်သက်တန့် မင်းရဲ့ ဆီးနှင်းဖြူကို သူ့အိမ်က စာမေးပွဲပြီးတာနဲ့ ကားနဲ့လာခေါ်သွားတယ်ကွ ပြဿနာတစ်ခုခု ဖြစ်နေပုံပဲ ရေးကြီးသုတ်ပြာနဲ့"
ဟုပြောသည် ။ ဘာတွေများဖြစ်တာပါလိမ့် ။ သူ ဆီးနှင်းဖြူတို့ အိမ်သို့လျောက်လာခဲ့သည်။ မြင်ကွင်းက မယုံနိုင်စရာ ။ ဆီးနှင်းဖြူတို့အိမ်လေးက သော့ခတ်ထားပြီး အိမ်ရှေ့မှ ဆိုင်းဘုတ်လေးက "အိမ်ရောင်းမည်" တဲ့ ။
အလွမ်းတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာမို့ပါ ....
ကောင်မလေးနဲ့ မတွေ့ရတဲ့ရက်ပေါင်း ၁၅၀ မြောက်မှာပေါ့... ။
သူတစ်ယောက်တည်း အင်းလျားကန်ဘောင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီး ကဗျာရေးနေမိသည်။ ထိုအခိုက် လေပြင်းတွေက နဲနဲပြင်းလာသည်။ မိုးစက်မိုးမှုန်တို့က မျက်နှာပေါ်ကျရောက်လာသည်။ ကဗျာစာအုပ်ကို ပိတ်ကာရင်ခွင်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်သည်။ ကောင်းကင်ကိုမော့ကာ မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်ပြီး မိုးစက်မိုးမှုန်တို့၏ အရသာကို နှစ်သက်စွာခံယူနေမိသည်။ ရုတ်တရက် အာရုံတစ်ခုကြောင့် မျက်လုံးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ထီးဖြူဖြူလေးတစ်လက် သူအံ့သြစွာနောက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့...
အချိန်နာရီတွေ ခဏရပ်တန့်သွား၏ ။ ရွာချနေသော မိုးရေတို့ ခေတ္တရပ်တန့်သွားကြသည် ။ သက်ရှိသက်မဲ့အားလုံး ရပ်တန့်သွားကြလေသည်။ သူမ ဆီး...နှင်း.....ဖြူ ။ သူဆွံအစွာငေးကြည့်နေမိစဉ်မှာပင်
" ဘယ်လိုလဲ ကိုယ့်ဆရာရဲ့ အအေးမိမှာ မကြောက်ဘူးလား ဘယ့်နှယ့်မိုးရေထဲ ဇိမ်ခံနေရတာတုန်း "
" ဆီးနှင်းဖြူ ဒီ...ဒီကို ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ"
" အိမ်တံခါးလည်း သော့ခတ်ထားတယ်"
" အရမ်းချစ်တယ် ဆီးနှင်းဖြူရယ်.. "
" သိသားပဲ" " ဟင်.. ဘယ်လိုလုပ်သိရတာတုန်း"
" ဟွန်း..သူများပေတံပေါ်မှာ L O V E ဆိုပြီး စာလုံးလေးထွင်းပြီးပေးကတည်းကပေါ့ "
" ဟင် ဒါ..ဒါဆို "
" ဒီလိုပဲပေါ့ "
ပြောပြီး လှစ်ကနဲပြေးထွက်သွားသည်။ ဒီတခါတော့ သူ အပျောက်မခံနိုင်တော့ ။ ကောင်မလေး လက်ကိုဆွဲပြီး ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာပေါ် ရှိအနူးညံ့ဆုံး ကဗျာ တစ်ပုဒ်ကို သင်ကြားပေးလိုက်သည်။ သစ်ကိုင်းပေါ်မှ ငှက်နှစ်ကောင်က ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီး ကဗျာစပ်နေပုံရသည်။ အင်းယားရေပြင်ကို နှစ်ဦးသားပြန်ကြည့်လိုက်တော့
ရေပြင်ကြီးက ရှက်နေသည်ထင့် ။ ရွှေအိုရောင်သက်တန့် ကြီးတစ်ခုက ရှက်ပြုံးကြီးပြုံးလို့................ ။
စိတ်မကောင်းပါဘူး ခင်ဗျ .....ဘလော့တန်းပလိတ်လေးကို three column ပြင်ချင်တာ တပိုင်းသေနေပါတယ် ။ အဲဒါကို စမ်းလိုက်တာ ကျနော့်ဘော်ဒါလင့်များပျောက်ကုန်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် လင့်လေးတွေကို အချိန်ယူပြီး ပြန်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုမှသဘောမထားပဲနဲ့ စီဘောက်ကနေ လင့်လေးတွေ ချန်ထားခဲ့ကြပါနော် ။ အပြန်အလှန်ချိတ်ထားတဲ့ အိမ်တွေလည်းပျောက်ကုန်လို့ ။ စိတ်ဓါတ်ကတော့ ဟိုး အ၀ီစိထိရောက်သွားပါတယ် ။
two column ကနေ three column ပြောင်းနည်းလေးများရှိရင် ပြောပေးသွားကြပါခင်ဗျ ။ ဘယ်မှာသွားကြည့်ရမလဲလို့ ။ အခုလက်ရှိ theme မှာပဲ three column ထည့်ချင်တာပါ ။
Posted by သက်တန့်ချို at 4:06 PM 18 comments:
ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ (အပိုင်း ၇)
အိပ်ပျော်လုဆဲဆဲမှာပင် လှမ်းအော်သံကြောင့် ဟိုကောင်တွေပဲဖြစ်မှာပဲဟု တွေးပြီးထလာခဲ့သည်။ အိမ်ရှေ့ ရောက်တော့ မျော်လင့်မထားသော မြင်ကွင်းကြောင့် ကြက်သေသေသွားမိသည် ။ “ နှင်းပွင့်ဖြူ” သူမ သူ့အိမ်ရှေ့မှာထိုင်ရင်း သူ့ကို ပြုံးပြနေသည် ။
“ နှင်း....နှင်းပွင့်ဖြူ ..နင် ... ဒီကိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာတာလဲ”
“ဥုံဖွဆိုပြီးတော့ ရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဟ ဒီလိုပဲ စုံစမ်းရင်းနဲ့ရောက်လာတာပေါ့ နင်ရန်ဖြစ်တယ်ကြားလို့ နောက်ပြီး နင့်ကိုလည်း ရှင်းပြစရာလေးတွေ ရှိလို့”
“ ဟ ရှုး တိုးတိုးလုပ်ပါဟ အိမ်ကိုလိမ်ပြောထားတာ”
“ လာဟာ အအေးဆိုင်သွားရအောင်”
“ ဟဲ့နင်လိုက်လို့ ဖြစ်ပါ့မလား ခေါင်းမှာ ဒါဏ်ရာကြီးနဲ့ဟာကို”
“ ဖြစ်ပါတယ်ဟာ .. အမေေ၇... အပြင်သွားလိုက်ဦးမယ်”
" အေးအေး မိုးမချုပ်စေနဲ့နော်..သား”
ဒီလိုနဲ့ သူနှင့် နှင်းပွင့်ဖြူ အအေးဆိုင်လေးသို့လျောက်လာခဲ့သည် ။
“ သက်တန့် နင်ဘယ်သူတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်တာလဲ”
“ ဒီလိုပါပဲဟာ ရုပ်ဖြောင့်တော့လည်း လူတိုင်းက မနာလိုကြတာပေါ့”
“ ကောင်စုတ်အကောင်းမေးနေတဲ့ဟာကို ဟွန်း”
“ မသိချင်ပါနဲ့ဟာ ဒီလိုပါပဲ ဒါနဲ့ နင်ရှင်းပြစရာရှိတယ်ဆို ဘာလဲပြောပါဦး”
“ ဟို ဟို.. နင်ငါ့ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ”
“ ပခုံး နှစ်ဖက်ကြားခေါင်းပေါက်နေတဲ့ သတ္တ၀ါပေါ့ဟ”
“ အာ ...နောက်တောက်တောက်နဲ့နော်.. ဟို ငါ့ကို နင်ရိုင်းတယ်လို့များမထင်ဘူးလား”
“ ဒီလိုလေဟာ နင်နဲ့ငါစတွေ့တုန်းက ငါက နင့်ကို လျော်ကြေးပေးမယ်ဆိုပြီး ပိုက်ဆံပေးတဲ့ ကိစ္စလေ အဲဒါငါနင့်ကို ရှင်းပြချင်လို့ ..အဲဒီနေ့က ငါကျောင်းအပ်ပြီးအပြန်ပေါ့ ငါ့အဖေက အစိုးရ၀န်ထမ်းလေ ဒီကိုပြောင်းလာရတော့ ငါလည်း ကျောင်းလိုက်ပြောင်းရတာ အမှန်က ငါကျောင်းလုံးဝမပြောင်းချင်ဘူးဟ ဟိုမှာ သူငယ်ချင်းတွေအများကြီး ငါ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေလည်း ရှိတယ် အဲဒါ အိမ်နဲ့ငါနဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာ ဒေါသလည်း ထွက် စိတ်လည်း ညစ်နေတဲ့အချိန်ဟာ အဲဒီအချိန်နင်နဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်တော့ ငါလည်း စိတ်ထဲမှာမရှိပဲ ဟိုလေလာ ဟို.. ၀ထ္ထုတွေထဲကလို မျိုးလုပ်ကြည့်လိုက်တာ ဟီး မင်းသမီးက ပိုက်ဆံနဲ့ အရာရာကို ဖြေ၇ှင်းနိုင်တယ်လို့ ထင်နေတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ပေါ့ စိတ်ထဲမှာတော့ အဲဒီလိုကျောချင်တဲ့စိတ် ပိုင်းချင်တဲ့စိတ်တွေ ငါ့မှာ လုံးဝမရှိပါဘူးဟာ အဲဒါငါနင့်ကို မရှင်းပြရမချင်း နေလို့မတတ်လို့ အခု တမင်တကာလာ ရှင်းပြတာ နင်ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါနော် သက်တန့်”
စကားတွေအများကြီးပြောပြီး တတွတ်တွတ်၇ှင်းပြနေသော ကောင်မလေးကို ကြည့်ရင်း သူပြုံးလိုက်မိသည် ။
“ နင့်မျက်နှာကို ကြည့်ကတည်းက အဲဒီလို လူတစ်ဖက်သားကို မလုပ်တတ်မှန်း ငါသိပါတယ်ဟ နင်အဲဒီတုန်းက လူကြားထဲမှာ ရန်ဖြစ်တာကို ရှက်လို့ ရှက်ရမ်းရမ်းလိုက်မှန်းလည်း သိတယ် ဒါနဲ့ ဟို..နင့်ကို လည်းပြန်တောင်းပန်ရဦးမယ် ..ငါလေနင့်ကို...ဟို... ‘ .......’ တုန်းက နင်ငါ့ကို အတော်၇ဲတာပဲဆိုပြီး စိတ်ဆိုးသွားမှာပဲနော်ဟုတ်လား”
“ အာ...ဒီကောင် ဘာတွေပြောသွား...”
မျက်နှာလေး က ချက်ချင်းနီရဲတက်လာသည် ။ပြီးနောက် လှစ်ကနဲ ပြေးထွက်သွားသည် ။ ထိုအခိုက် ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီမှာ သစ်ရွက်တွေက လေတစ်ချက်ဝှေ့လိုက်တော့ ၀ဲပျံတက်သွားကြသည် ။ နီညိုရောင် တိမ်စိုင်တွေက ကလေးဆန်စွာ ကောင်းကင်မှာ ဆော့ကစားနေကြသည် ။ ချစ်ရသူနဲ့ စကားတွေပြောပြီး မျက်နှာလေးကို ဘေးတိုက်ခိုးခိုးကြည့်ရသည်မှာလည်း ကဗျာဆန်လှသည် ။ နှလုံးသားတွေ နွေး.....က.....နဲ.....ပေါ့ ။
ဒီနေ့သိုင်းပြိုင်ပွဲစပြီ ။ အေခန်းကိုယ်စားပြု သူဝင်ပြိုင်မည်ဟု စာရင်းပေးလိုက်သည် ။ ဆရာဝန်၏ ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်ကြောင်းလက်မှတ်ပါ ပူးတွဲတင်ပြလိုက်သည် ။ သူက အထက.၁ ကိုယ်စားပြုပြီးဝင်ပြိုင်ရခြင်းဖြစ်သည် ။ ပြိုင်ပွဲမစခင် ၁ နာရီအလို နှင်းဆီဖြူနှင့်တွေ့သည် ။
“ သက်တန့် နင် ..သတိထားဦးနော်... စာမေးပွဲကနီးနေပြီ တော်ကြာနင်တစ်ခုခု ဖြစ်ရင်...”
“ တစ်ခုခုဖြစ်တော့ ဘာဖြစ်တုန်း ဆီးနှင်းဖြူရဲ့”
ဘယ်ဖက်ရင်အုံတစ်ခြမ်း နွေးကနဲဖြစ်သွားသည် ။
“ အေးပါဟာ ငါသတိထားမှာပါ”
ပြိုင်ပွဲက ကျောင်း ခြောက်ကျောင်း ရုံးထွက်ဖြစ်သည် ။ မဲနှိုက်တော့ ထ.၁ နှင့် ထ.၄ ၊ ထ.၂ နှင့် ထ.၆ ၊ ထ. ၃ နှင့် ထ.၅ တို့ ယှဉ်ပြိုင်ရမည် ဖြစ်သည် ။ ဒိုင်လူကြီးမှ ၀ီစီသံပေးသည်နှင့် တစ်ကိုယ်လုံး ရှိ အကြောအချင်တို့ကို လျော့ချပစ်လိုက်သည် ။ တစ်ဖက်လူ၏ တိုက်ကွက်ကို မမှိတ်မသုံ လိုက်ကြည့်လိုက်သည် ။ လှစ်ကနဲဝင်လာသော ညာခြေကို ဘယ်ဖက် ညိုသကြီးနှင့် ဆီးခံပေးလိုက်သည် ။ နဲနဲတော့ အီသွားပုံရသည် ။ တော်ရုံရမ်းပြီးဝင်မလာရဲတော့ ။ ဆတ်ကနဲ မေးရိုးကို ညာဖြောင့်လက်သီး ပစ်ထည့်လိုက်သည် ။ သကောင့်သားက ခေါင်းငုံ့ပြီးရှောင်သည် ။ ကြိုက်သည်ပေါ့ လိုချင်သည့်အကွက်ထဲ သိပ်မပင်ပန်းလိုက်ရပဲ ၀င်လာသည် ။ ငုံ့ရှောင်လိုက်သော မျက်နှာကို ဒူးခေါင်းတစ်လုံး ပစ်ထည့်ပေးလိုက်သည်။ ပွဲက ဒီမှာတင် ပြတ်သွားသည် ။ နောက်တစ်ဆင့်ယှဉ်ရမှာက ထ.၅ နှင့် ။ ဒီတစ်ချီလည်း ခပ်မြန်မြန်ပင် ပွဲပြီးသွားသည် ။ နောက်ဆုံး ဖိုင်နယ် ။ သူနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်က ထ.၆ ။ ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ တစ်ဖက်လူကိုကြည့်လိုက်တော့ ဟိုကောင် ကျော်ဇေယျာဝင်းတင့်ဆိုသူဖြစ်သည်။ အော်... ဒီကောင်က ထ.၆ ကကိုး ။ သူ့ကို တွေ့လိုက်သည်နှင့် ဟိုကောင် မျက်စိမျက်နှာပျက်သွားသည် ။ ဒိုင်လူကြီး၏ ခရာသံဆုံးသည်နှင့် သားရဲတစ်ကောင်လို သူ့ကို အတင်းဝင်တိုက်တော့သည် ။ သူကတော့ သွေးအေးအေးပင် ။ ဒီကောင့်အမှားကို စောင့်နေလိုက်သည် ။ ထိုအခိုက် လူအုပ်ကြားထဲမှာ ဆီး..နှင်း....ဖြူ...လေး ။ သူ့ကို ငေးကြည့်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ သူကောင်မလေးကို သတိလက်လွတ် တစ်ချက်ငေးကြည့်မိတုန်း ရိပ်ကနဲဝင်လာသော လက်သီးကို ရုတ်တရက် ရှောင်ချိန်မ၇လိုက် ။ လူက အမှောင်ကမ္ဘာထဲ ခေတ္တရောက်သွားသည် ။ နားထဲမှာ အော်ခေါ်သံ တွေကြားနေရသည် ။
“ သက်တန့် သက်တန့်..အီး...ထပါသက်တန့်ရဲ့..ဟီး...”
ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ သူ့ကိုတတွတ်တွတ် ပြောနေသော ဆီး..နှင်း...ဖြူ ။
မင်းအသံလေးနဲ့တင် လုံလောက်ပါတယ် ကောင်မလေးရယ် ... ။
“ ၄ ... ၅... ၆... ၇...”
ရှိသမျှ အားအင်ကို ယူ၍ သူရပ်လိုက်သည် ။ တဖက်လှည့်၍ အောင်ပွဲခံနေသော ဟိုကောင် သူထလာ၍ ဒေါသထွက်သွားပုံရသည် ။ သူအမြန်ဆုံး စိတ်ကို စုစည်းလိုက်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 10:23 AM4comments:
ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ (အပိုင်း ၆)
ကျူရှင်မှအပြန် မိုးကရုတ်တရက် ၀ုန်းကနဲရွာချလိုက်သည်။ သူလည်း မိုးရွာထဲမှာ လမ်းလျောက်လာနေကြမို့ တစ်ယောက်တည်းပဲ တိတ်တဆိတ်လျောက်လာနေမိသည်။ လမ်းချိုးတစ်ခုသို့ ကွေ့ကာနီးတွင် စိတ်ထဲမှ အန္တရာယ်၏ အငွေ့အသက်တစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ လမ်းကွေ့လူပြတ်နေရာတွင် ကုက္ကိုလ်ပင်ကြီး တစ်ပင်ရှိသည် ။ ထိအပင်ကြီးအောက်တွင် သူနှင့်ရွယ်တူလေးယောက် ပေစောင်းစောင်းနှင့်သူ့ကို ကြည့်နေသည် ။ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ပဲ လမ်းကို လျောက်လာခဲ့သည် ။ ထင်သည့်အတိုင်းပင် သူတို့ အရှေ့မှ ဖြတ်
လျောက် တော့ လေးယောက်စလုံး သူ့ရှေ့မှ ပိတ်ရပ်လိုက်ကြသည် ။ အဲဒီထဲက တစ်ကောင်က ကျူရှင်မှာ တွေ့ခဲ့သည့် " ကျော်ဇေယျာဝင်းတင့်” ဆိုသူ ဖြစ်သည် ။ ထိုသူကပင်စ၍
“ ဒီမှာ ဘော်ဒါ မင်းက နှင်းလေးကို လိုက်နှောက်ယှက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကောင်လား”
“ နေပါဦး မင်းမေးတိုင်း ငါက ဖြေရမှာလား”
“ ဟဟ.. ချာတိတ်က အလာကြီးပါလား မင်းင့ါကို မသိသေးဘူးနဲ့ တူတယ် ငါ့နာမည် လက်မရွံ့ဇေယျာတဲ့ မှတ်ထားဦးချာတိတ်”
( အော်ဒုက္ခ ဒုက္ခ .. ဘယ်တုန်းက သူ့နာမည်သူပေးလိုက်သလဲ မသိ )
“ ကဲ ကြာပါတယ်ကွာ ဘော်ဒါတို့ရေ စလိုက်ကြရအောင်”
စကားပင်မဆုံးသေး သကောင့်သား ပက်လက်လန်သွားသည် ။ ဟုတ်တယ်လေ သိုင်းပြိုင်ပွဲမှ မဟုတ်တာ တိုက်စစ်တွေခံစစ်တွေ မစဉ်းစားနိုင်တော့ ။ မျက်နှာကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်တွယ်ထည့်လိုက်သည် ။
နောက်တစ်ကောင်က တုတ်နှင့် ၀င်အရိုက် ခေါင်းကို အသာငုံ့ပြီး မေးစေ့ကို လက်ဖမိုးနှင့် ပင့်တင်ပေးလိုက်သည် ။ သွားရှာပြီတစ်ကောင် ။ ထိုစဉ် တစ်ကောင်က လှစ်ကနဲ စကေဘာနှင့် ၀င်ထိုးသည် ။ သူ့ထိုးချက်ကို ရှောင်လိုက်စဉ်မှာပင် နောက်မှ ပစ်ထည့်လိုက်သော အုတ်ခဲ့အကျိုးကြောင့် ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံး ပူထူသွားသည် ။ ကျနော်သွေးတွေနှင့် လဲကျသွားတာမြင်တော့ လေးယောက်စလုံး ကြောက်အားလန့်အားထွက်ပြေးသွားကြသည် ။ သတိမလစ်အောင်ထိမ်းရင်း လမ်းမှာ လာသည့် ဆိုက္ကားကို တားကာ ဆေးခန်းသို့လစ်ခဲ့သည် ။ အကျိုးဆက် ကား လေးချက်ချုပ်လိုက်ရသည် ။ အင်း ဒီတိုင်းဆို ကျောင်းပေါင်းစုံ သိုင်း ပြိုင်ပွဲတောင် ၀င်ပြိုင်နိုင်ပါ့မလား ။
အိမ်ရောက်တော့ ချော်လဲ၍ ချုပ်လိုက်ရသည် ဟုလိမ်ပြောလိုက်သည် ။ အိမ်က သိပ်တော့မယုံချင် ။ သို့သော်ကိုယ်က ရန်တွေဘာတွေ အချိန်တိုင်း ဖြစ်နေတတ်တဲ့သူမဟုတ်၍ မယုံချင့်ယုံချင်နှင့် ယုံလိုက်ကြသည် ။ ဒီလိုပါပဲ ဘ၀မှာ လူသားတိုင်း အနဲဆုံး တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ လိမ်ဖူးသောသူချည်းပင် ။ ခေါင်းကတစ်ဆစ်ဆစ်ကိုက်လာသောကြောင့် ဆေးတစ်ခွက်သောက်ပြီး အိပ်ရာထဲမှိန်းနေလိုက်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 9:48 AM3comments:
Happy Birthday နှင်းဟေမာ (နှင်းကဗျာ ၊ သူငယ်ချင်းအတ...
ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ (အပိုင်း ၅)
ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ (အပိုင်း ၄)
ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ (အပိုင်း ၃)
ရင်ထက်ထက်က ဆီးနှင်းသံ (အပိုင်း ၂)
အံ့သြဖွယ်ရာ မြစ်တစ်ခုအောက်မှ နောက်ထပ်မြစ်တစ်ခု
ကျိန်စာတွေ သင့်ခဲ့ကြတာလား ?
ကြောက်လိုက်ပါဘိ.....အိုတစ္ဆေ ( အပိုင်း ၄ - ဇာတ်သိမ်း)
ကြောက်လိုက်ပါဘိ....အိုတစ္ဆေ (အပိုင်း ၃)
ကြောက်လိုက်ပါဘိ.....အိုတစ္ဆေ ( အပိုင်း ၂ )